မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ အရွယ်ရောက်လူ အကုန်သိတယ် … :P | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ အရွယ်ရောက်လူ အကုန်သိတယ် … :P
မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်နဲ့ အရွယ်ရောက်လူ အကုန်သိတယ် … :P
Posted by နွယ်ပင် on Jun 18, 2013 in Creative Writing, Entertainment, My Dear Diary | 17 comments
ဒီပိုစ့်က တင်ပြီးသားပါ ဒါပင်မယ့် ပျက်တဲ့အထဲ ပါသွားလို့ မကျေနပ်လို့ ပြန်တင်ပါအိ သူများမှာ (6) လနေမှ ပိုစ့်လေး တစ်ခါရေးပါတယ် ပျက်သွားတဲ့ အထဲပါသွားတယ် ……
နွယ်ပင် အခုတစ်လော အလုပ်မှာ ပင်ပန်းလို့ စိတ်ရှုပ်စိတ်ပျက်နေရတဲ့ ကြားထဲ ရာသီဥတုကလည်း မသာယာ နောက် အိပ်ရာနိုးရင်လည်း ခေါင်းကကိုက်နဲ့ အလုပ်ကို သွားရင် လူက ညည်းစိစိကြီးနဲ့ စိတ်ထဲ မ၇ွှင်မလန်းဖြစ်နေတာ အတော်ကြာပီ အဲတာကြောင့်ထင်တယ် စိတ်ကလည်း မလန်းမဆန်းဖြစ်နေတော့တာပဲ ..
အဲတာနဲ့ အိမ်မှာ ဟာသကား ငှားကြည့်တော့လည်း စိတ်နဲ့ လူနဲ့ကလည်း သိပ်မကပ်သလို ဖြစ်နေပြန်တော့ ၇ီစရာကလည်း မကောင်း စိတ်မလန်းတဲ့ အပြင် ပိုပြီး စိတ်ရှုပ်တဲ့ ခံစားမူပဲ ရတယ် .ဒါနဲ့ ပီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် စနေမှာ အိမ်မှာ အမျိုးတွေ စုကြမယ်ဆိုတော့ စိတ်ရှုပ်ရတဲ့ အထဲ လူတစ်ရုံးရုံး၇ှိဦးမှာပဲဆိုပီး အမျိုးတွေ မလာခင် လူက ကြိုပီး ပင်ပန်းနေပြန်ရော .. ဒါပင်မယ့်လည်း စနေနေ့လည်းရောက်ရော မတွေ့ရတာကြာတဲ့ မောင်နှမတွေ သူတို့ကလေးတွေရော ဦးလေးလေးတွေ အဒေါ်တွေစုတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ ပျော်လိုက်ကြတာဆိုတာ …
အဲဒါနဲ့ အခုတစ်လော ဖွဘုတ်ထဲ လူပြောများနေတဲ့ မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည်ကို ငှားကြည့်ကြမယ်ပေါ့ဆိုပီး အစ်ကိုတစ်ယောက်ကစပြောရော အဲမှာ ဇာတ်လမ်းက စတော့တာပဲ ….
ဇာတ်လမ်းကြည့်ကြတော့ ငယ်တဲ့ ကလေးတွေကတော့ သူတို့ဘာ သူတို့ဆော့နေကြတာပေါ့ ဒါပင်မယ့် အရွယ်လေး မရောက်တစ်ရောက် တူမ (2) ယောက်နဲ့ တူတစ်ယောက်ကတော့ အဒေါ်တွေ ဦးလေးတွေ ကြားထဲ 0င်လို့ လူကြီးတွေ ပြောတာ လိုက်နားထောင်လိုက် တီဗီလေးကြည့်လိုက်နဲ့ပေါ့ အဲံ အချိန်မှာပဲ ဖွဘုတ်ထဲ တင်တဲ့ ဇာတ်0င်ခန်းလေး နေတိုးနဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ အခန်းလည်းစရော ကလေးတွေက မျက်လုံးလည်း တစ်ကယ့်ကို ကလည်ကလည်နဲ့ ကြည့်နေကြတော့တာပဲ ဒါနဲ့ အစ်ကို0မ်းကွဲတစ်ယောက်က နွယ်ပင့်ကို “ဟဲ့ ရစ်လိုက်လေ နင့်နှယ့် ကြည့်လို့ကောင်းနေလားလို့ ” ပြောတာနဲ ရစ်ဖို့ ရီမုတ်လိုက်ရှာတာ ဘယ်ကလေး ကောက်မပြီးဆော့နေမှန်း မသိ ၇ှာလို့ကို မတွေ့ဘူး အမှန်က ရစ်စရာမလိုပါဘူး ကိုယ်တွေက အဲ့တာကို ကြည့်ချင်လို့ ငှားတာပဲဟာကို အခုဟာက ကလေးတွေလည်းပါတော့ ရစ်ခိုင်းတာကို ၇ီမုဒ်ကလည်းမတွေ့ဆိုတွေ့ အကဲပိုတဲ့ အစ်ကိုက (အမှန်က သူ့သမီးလည်း ကြည့်နေတော့) ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ လုပ်မိလုပ်ရာထပြီး တီဗီေ၇ှ့ သူပုဆိုးကြီးဖြန့်ဲပီး ကာလိုက်တော့ကာမှ ခုနကကလေးတွေ မျက်လုံးလေးကလည်ကလည်ကနေ မျက်0န်း0ိုင်း0ိုင်းတွေကို ဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပဲ …. တွေးတာကြည့်ပါတယ် တီဗီက အလင်းရောင်ရယ် နေ့ခင်းဘက် နေအလင်းရောင်ရယ် ပေါင်းပီးတော့ ….. တီဗီေ၇ှ့မှာ ပုဆိုးကြီး ဖြန်ပြီဲးကားကားကြီး ရပ်နေတဲ့ အစ်ကိုရဲ့ ပုံစံရယ်ကို ….. ရယ်လိုက်ကြတာဆိုတာ တစ်အိမ်လုံး0က်0က်ကို ကွဲလို့ နွယ်ပင်လည်း တစ်ပတ်လုံးညစ်နေတာတွေ အကုန်ပျောက် မျက်ရည်တောင် ထွက်တာ ရီလိုက်ရတာ … ဒီအထဲ အသည်းနာဆုံးက အစ်ကိုပဲ သူမှာ့ ၇ှက်လည်း၇ှက် ရီလည်း၇ီချင် ဆိုတော့ နောက်ဆုံးအပစ်ပုံချလိုက်တာက ” ဒီ S ဗမာကားတွေ ဒါများ အဆန်းလုပ်လို့ ရိုက်ပြနေသေးတယ် အ၇ွယ်ရောက် လူအကုန်သိတယ်ဆိုပဲ …”
အဲဒါ မျက်လုံး ကလယ်ကလယ် မဟုတ်တော့ဘူး မျက်လုံးဂျီး ချာလပတ်လည်…
ကောင်းတယ်.. ကောင်းတယ်.. ပြန်တင်ပေးတော့ ပြန်ဖတ်တာပေါ့နော..
မန့်ထားတာတွေ အတွက် နှမျောစရာကွီ..
ဇဂါး လွတ် @
စိတ်ညစ်နေတာကို မျက်လုံးလေး ကလယ် ကလယ် နဲ့ ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိ။
အခုရက်ပိုင်းအိုက်လိုတောင်မရီနိုင်တာကြာဘီ… ကျေးဇူးပါနွယ်ဗင်ရယ်… :harr:
မျက်လုံးလေးကလည်ကလည် ကျိရင်း ချိန်သီးလေးလှုပ်စိလှုပ်စိ ဇာတ်ကား ကြော်ငြာ ၀င်သွားတယ်ပဲ မှတ်ပါတယ်အေ…
ခင် ခ @
ဒါဆို တီဗီကြည့်တဲ့နေတဲ့ မျက်လုံးတွေက နှစ်ကလည် ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး @
အွမ် .. အွမ် .. ခွီခွိ …
ဟိုလူဂျီး အဖြစ်ကို တွေးပီး ..
တကယ်ဘဲ …. ခွီခွိ …
ဒါနဲ့ .. မှတ်ထားရဦးမယ် …
“အရွယ်ရောက် လူအကုန်သိတယ်” …..
မျက်စိထဲကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီး ဖြစ်သွားတယ်…..
ခေါင်းလောင်းက ဂလောင် ဂလင် ဂလောင် ဂလင်နဲ့ ……..
အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ မြန်မာကားတွေလည်း အဆင့်သတ်မှတ်သင်ပါပီလို့ …………
မရိုက်ပါနဲ့လို မတားဖူး…. ရိုက်….. ဒါပေမဲ့ အဆင့်လေးသတ်မှတ်…..
ပီးတော့ ရီမုဒ်လေးတွေ ဆောင်ထားကြ……
နေတိုးနဲ့ ဖွေးဖွေးကလည်း မကြာခင် လာမည် မျှော်တဲ့….. ( အတွင်းစကားအရ နေတိုးနဲ့ ဖွေးဖွေး အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ ပြောတယ်… ဟို ပွတ်စိတ်လို မပီမပြင် ဖြစ်မှာကြောက်လို့ တဲ့…)
ဟား.. ဟား… နွယ်ပင် အစ်ကို အဖြစ်က ရယ်အားထက် ငိုအားသန် သလို ဖြစ်သွားရှာတာကိုးး..
ကလေး တွေ မျက်လုံးလေး ကလည် ကလည် ကနေ မျက်လုံး ပြူးပြူးလေးတွေ ဖစ်တွားရှာမှာပေါ့…
Shwe Ei @
အိမ်း….ဇာတ်ဝင်ခန်းဘဲ ဆက်ကြည့်နေလိုက်ရင်တောင်…မျက်လုံးလေး ကလယ်စရာ အကြောင်းသိပ်မရှိဝူး….အဂုဒေါ့….ခိခိ
အိုက်ဇာတ်ကား ရိုက်ချက်က ပြောလောက်အောင် မပီပြင်ပါဝူး ဘင်ဘင်ရယ်…ရှေးတုန်းက ကားတေနဲ့ ထူးမခြားနားဘာဘဲ…ချာတူးပြောသလို ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ…ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပီးမှ သိတော့တာ…
ညက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ ရယ်လိုက်ရဒါ ဗျဲ
တောက်လျှောက်ဖတ်လာဒါ … အေးချေးပဲ
ဦး ကျောက်ခဲ @
အောင်မယ်ငီး… ဦးကျောက်မှာ အပျိုပေါက်တူမလေးရှိလေတော့…
ဒီလို ဓာတ်ရှင်မျိုးလည်း မကြည့်စေရ…
အဲ… ပုဆိုးလည်းမဝတ်တတ်လေတော့ ဒါမျိုးတော့ဖြစ်မယ်မထင်…
အနှီ… ဒါရိုက်တာကို ထိပ်သာပြေးထုချင်ရဲ့…
“သူ့ နံရိုးကြီးက လာမတောင်းပန်ကြေး”
နွယ်ပင်ရဲ့ အစ်ကိုက ရွှေခေါင်းလောင်းပုဆိုးကြေငြာလိုက်တာပေါ့
ကိုယ်တိုင်းရီးလို့အားမရလို့ သူများတွေကိုပါပြောပြပြီး ရီလိုက်တယ်
may july @
ရုံးမှာဖတ်ပြီး ရီ လိုက်ရတာ ဗိုက်တောင်အောင့်တယ်အေ .. :harr: :harr:
ဖတ်ပြီးတော့ အဆုံးပိုင်းမှ ရီလိုက်ရတယ်..
တော်သေးတာပေါ့.. အမြင်ကတ်ကတ် နဲ့ တီဗွီကြီး စောင့်မကန်လိုက်လို့..
အော် ကျုပ်မရှိတဲ့ အချိန်လေးအတွင်းမှာတောင် ဒီလိုလေးတွေဖြစ်သွားသပေါ့လေ…။ အိမ်း ကောင်းလေစွ…ကောင်းလေစွ….ရယ်ရစွ
ပြူးတူးတူးတွေပဲ ကြည့်တော့မယ်.. အဲ့လာက ပိုစိတ်ထချမ်းသာသေး…
အရင် Comment လေးတွေပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ချင့်
ဟုတ်ပဂျာ… အခုလို ကော်မန့် တွေ ပြန်ထုတ်ပြမှပဲ….
ကိုယ် ဘာမန့် လိုက်တလဲဆိုတာ သတိရတော့တယ်….
ဘာပြန်မန့် ရမလဲလို့စဉ်းစားနေရတာ…..
စကားမစပ် အဲ့ကော်မန့် တွေ ဘီနားက ပြန်ရလဲဟင်
ပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး အားရပါးရရီနေတုန်း ကွန်မင့်တွေဖတ်လိုက်ရတော့ မျက်ရည်တွေပါထွက်လာတယ်။ နွယ်ပင် ရဲ့ကွက်ကွက်က သူတို့ကွန်မင့်နဲ့မှ ကွင်းကွင်းဖြစ်တော့တယ်။
နောက်တစ်ခါ ရီရ မန့်ရတာပေါ့ရယ်။
ဦးကျောက်စ်မှာ ဘာမန့်လိုက်မိမှန်းမမှတ်မိလို့ အတော်အုံးစားနေတာ…
ခုတော့ “မျက်ပြူးကြီး ကလည် ကလည်” ဖြစ်တွားဘီ… ဟီ ဟိ
ဟီးးးး မမနွယ်ပင်ရဲ့အကိုက အဲဒီကားမကြည့်စေချင်လို့ ခေါင်းလောင်းလေးတွေမြည်နေပြီဆိုတဲ့ ဗွီစီဒီပြောင်းဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ ..
အဟီ ဟီ ပြ နေတဲ့ကားထက် ပိုရီရတယ် မမနွယ်ရယ်
“ဦးဂျမ်းဆို ခေါ်ထားလိုက် ခေါ်ထားလိုက်´´
ပုဆိုးကြော်ငြာပြောပါတယ်၊ အခုရော ဘာတံဆိပ်လဲဟင်!
မြင်ကျိတယ်.. ဟီဟိ ဟီဟိ
မျက်လုံးကြီး လှုပ်ချိ လှုပ်ချိ နဲ့ ဟေဟေဟေ့
အော် မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်ကြည့်တာ…..
အခုတော့ မျက်လုံးကလေး ကလောင် ကလောင် ဖစ်တွားဒါပေါ့နော်… ဟိဟိဟိဟိ
ခေါင်းလောင်းထိုးသံ တိုက်တိုက်လေးကြားနေတယ်……။ လောကအလှသူမြင်သွားလို့ဖြစ်မယ်….။ တိုက်ရယ်……..၀ိုးဝိုး ခေါင်းလောင်းထိုးသံ….
ပြန် တင် ပေးလို့ ဖတ် ရတာ ။ ကျေးကျေး။
မျက်လုံးလေး ကလည် ကလည်နဲ့ဖတ် သွားပါတယ်။
မြန်မာ ဇာတ်ကားတွေ မကြည့် ဖြစ်တာ ကြာပြီ ဆိုတော့
မြန်မာ ဇာတ်ကား အကြောင်းး
သူ များ တွေ ဘာပြော ပြော
မျက်လုံးလေး ကလည်ကလည် နားထောင်နေပါတယ်။
မြန်မာ ကား တွေ ကို မကြည့်ချင်ပေမယ့်
ဝေဖန်ရေး လေကန်ရေး လေး တွေေ တော့
ဖတ် ချင် မိပါတယ်။
မြန်မာ ရုပ် ရှင် လောက ကို အဆက် မပြတ် ဖို့ လည်း လိုသေးတာကိုးးး
ကိုယ်က ချစ်သုဝေ ကို ခိုက်နေတာ လေ
ဘယ် တွေ ရောက် ကုန်ပါ လိမ့်
မနွယ်ပင်ရေ … ဖတ်ပြီး ရယ်ရတာ မျက်ရည်တောင် ထွက်တယ် … ။ အစ်မ အစ်ကိုရဲ့ ပိတ်ကားထောင်တဲ့ .. အိုက်ဒီယာလည်း သဘောကျမိပါတယ် … ။ ခိခိ … ဂယ်ဆို … တီဗွီ ခဏပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ ရပါသေးတယ် …. ။ ရုပ်ရှင်ကားတွေကလေ … မောင်နှမ ၊ သားမိ အတူကြည့်ဖို့ မသင့်တော်လောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ကောင်းလာတာတွေ့ရတဲ့အခါ …နောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့တောင် ရွေးစရာနည်းလာတယ် … ။ နဂိုကတည်းက ယုတ္တမရှိ ပညာမရတဲ့ ဇာတ်အိမ်မျိုးတွေများနေရတဲ့ အထဲ … တဖြေးဖြေး … ရွေးချယ်ပြီး ကြည့်စရာနည်းလာတယ် …. ။
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်မစိုးလို့ ခြင်ဆေးခွေတောင် မထွန်းတော့ဘူး…
မနွယ်ပင်ရေ…. ငြိမ်းလည်း အိမ်မှာ အစက ငှားကြည့်မလို့ပဲ။ နောက်တော့ အိမ်မှာ ညီမလေးတွေရှိတော့ မေမေက မကြည့်နဲ့ဆိုတာနဲ့ မကြည့်ရတော့ဘူး။
ဒါနဲ့ တကယ်ပဲ မျက်လုံးကလေး ကလည်ကလည်နဲ့…. အဲဟုတ်ဘူး.. မျက်လုံးကလေး အ၀ိုင်းသားနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။